M/weynihii hore ee Somalia oo dhaliilay qaabka dowlada ay u wajaheyso isbedelka gobolka… – Hagaag.com
M/weynihii hore ee Somalia oo dhaliilay qaabka dowlada ay u wajaheyso isbedelka gobolka…
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn u dhaliilay qaabka dowladda Federaalka u wajaheyso is bedelada ka socda Geeska Afrika qorshaha is dhex galka dalalka Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritrea.
Xasan Sheekh oo ka qeyb galayay dood looga hadlayay xaalada Soomaaliya oo Kismaayo uga qeyb galay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aanay weli u diyaarsaneyn qorshaha mideynta siyaasadda gobolka.
“Midda aan maanta la bilaabi karin waa siyaasadda, in la dhaho anaga iyo Itoobiya siyaasad ayaa ka midoobeynaa waqtigeeda ma ahan, dalkaan marka uu dego, oo dowlad yeesho oo dowladiisa dowlad adag noqoto aan eegno, maanta waxaa qabaa wada xaajoodka lama bilaabi karo”ayuu yiri Xasan Sheekh.
Sidoo kale Xasan Sheekh ayaa ka hadlay arrinta dhaqaalaha iyo kororka Miisaaniyadda, isagoo ku dhaliilay dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo inay siyaasadeysay arrimaha dhaqaalaha, isagoo xusay in kororka miisaaniyadda uu sanadba sanadka ka dambeysay uu sii kordhayay.
“Sanadkii 2013-kii ayeey soo bilaabatay kororka miisaaniyadda; sanadba sanadkii ka dambeeyay waay sii kordheysay, korarsiimadii ugu badneynd ee dhaqaale wuxuu dhacay xilligii aan aniga hayey talada, maaliyadda waa meesha dacaayad iyo Barobagaando aanan laga sameyn karin”ayuu yiri Xasan Sheekh.
Dad badan ayaa si weyn shaki uga qaba qorshaha is bedelada ka socda Gobolka iyo qorshaha is dhex galka dalalka Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya, waxaana siyaasiyiin badan ay qabaan in aanay weli u diyaarsaneyn Soomaaliya inay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan la midowdo Itoobiya iyo Eritrea.